DEG DEG:- C/raxmaan Faroole oo goordhaw shaaciyay inuu ka tanaasulay tartanka doorashada – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- C/raxmaan Faroole oo goordhaw shaaciyay inuu ka tanaasulay tartanka doorashada
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud (C/raxmaan Faroole) ayaa goordhaw ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, taas oo dhici doonto maalinta berri oo Arbaco ah.
C/raxmaan Faroole oo ka mid ahaa 23-ka musharax ee tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa shir jaraa’id uu goordhaw ku qabtay Muqdisho kaga dhawaaqay inuu isaga haray tartanka doorasho, waana musharixii labaad ee ku dhawaaqa inuu ka tanaasulay tartankaas.
Inkastoo aan la ogeyn sababta uu C/raxmaan Faroole uga tanaasulay doorashada ayaa hadane ilo lagu kalsoonaan karo waxay warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijiyeen inuu u tanaasulay madaxweyhii hore ee dowladdii KMG ahayd musharax Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Sidoo kale, C/raxmaan Faroole ayaa sheegayaa inuu ka mid ahaa musharaxiinta xalay heshiiska ku gaaray magaalada Muqdisho, kuwaas oo ku heshiiyay in la taageeri doonno musharixii ugu codka badan ee isbadel doonka ah, si meesha looga saaro inuu xukunka markale kusoo laabto Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhinaca kale, C/raxmaan Faroole oo haatan ka mid ah xildhibaanada Aqalka Sare ee dhawaan lagu soo doortay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal, ayaa hore u ahaa madaxweynaha maamulka Puntland.
C/raxmaan Faroole oo la sheegayo inay haatan saaxiibo dhaw yihiin madaxweynihii hore ee dowladii KMG aheyd Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si weyn ugu ololeeynayaa inuu markale xilkaasi kusoo baxo.
Si kastaba ha ahaatee, maalinta berri ayaa lagu wadaa in tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay ka dhacdo xarunta Afisyoone ee magaalada Muqdisho, iyadoona doorashadaasi ay tahay mid shacabka Soomaaliyeed ay si weyn ugu dhago taagayaan natiijadda kasoo bixi doonta.